आयोजकलाई हराउँदै न्यु एभरेष्ट अन्तिम चारमा – Khel Dainik
आयोजकलाई हराउँदै न्यु एभरेष्ट अन्तिम चारमा
तिलोत्तमा (खेलदैनिक) । बलियो आँकिएको आयोजक सन्जिवनी युवा क्लबलाई हराउँदै न्यु एभरेष्ट युवा क्लब जारी तेस्रो सन्जिवनी कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
सोमबार तिलोत्तमा–१४, बाघधुरा देवीनगर स्थित आयोजक क्लबको खेल मैदानमा भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा न्यु एभरेष्टले आयोजकलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ५–४ ले हरायो ।
त्यसअघि निर्धारित समयको प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोलीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए । नियमित समयतर्फ न्यु एभरेष्टका लागि निराजन खत्रीले गोल गरेका थिए भने सन्जिवनीका लागि एलिस लुंगेलीले गोल फर्काएका थिए ।
खेलमा सन्जिवनीका एलिस लुंगेली नै म्यान अफ द म्याच घोषित भए । प्रतियोगिता अन्तरगत मंसिर १७ गते मंगलबारको चौथो तथा अन्तिम क्वाटरफाइनल लुम्बिनी खुकुरी क्लब र रानीगंज युथ क्लबबीच हुने खेल संयोजक कमल परियारले जानकारी दिए ।
← तेक्वान्दोमा नेपाललाई पहिलो दिन सात स्वर्ण साग फुटबलमा आज नेपालको पुरुष र महिला दुवै टोलीको पहिलो खेल →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर १६, २०७६
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर १६, २०७६
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर १६, २०७६
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर १६, २०७६
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर १६, २०७६
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर १६, २०७६